Ekar Anjomakely – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Fankalazana ny Vatana aman-dRà Masin’i Kristy, taona B
« Sorom-pihavanana sy sakafo mampiray, ny Eokaristia »
Mankalaza ny fetin’ny Sakramenta Masina isika androany, ka hiezaka ny hanazava mikasika ny Eokaristia ary isika.
Betsaka ny adihevitra sy ny olana eo amin’ny hoe « Inona no mahasamy hafa ny Eokaristia aty amin’ny Katôlika sy ny Fanasan’ny Tompo any amin’ny fiangonana hafa ? Nahoana isika no tsy mahazo mandray ny Fanasan’ny Tompo ? Ary nahoana ny hafa finoana no tsy mahazo mandray Komonio ? » Anjarantsika ny miezaka : mahazo ny foto-pinoantsika mikasika ny Eokaristia, miaro ny finoantsika, tsy ho menatra hijoro amin’ny finoana.
Ny Tenin’Andriamanitra anio ary no mamaly izay mety ho fanontaniana ao amintsika ao izay sy izay fanazavana hanampy azy :
Boky Eksaody 24,3-8
Ity Tenin’Andriamanitra ity dia maneho ny endriky ny Eokaristia : rehefa nivoaka ny tany Ejipta ny vahoaka Israely dia nanao ny Fanekem-pihavanana voalohany tamin’izy ireo Andriamanitra. Ny olona tsy mifankahazo no mila fampihavanana ; ka tafasaraka tamin’Andriamanitra ny olombelona satria noravan’ny olombelona tamin’ny alalan’ny (suite…)
Continuer la lecture Toriteny Alahady 03 Jiona 2018
Alahady manaraka ny Pantekôty, fanakalazana ny Trinite Masina, taona B
« Antsoin’Andriamanitra hiray fianakaviana Aminy isika»
Ny Trinite Masina dia antsoina ihany koa hoe « Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina », « olona iray tsy mivaky », « Andriamanitra tokana olona telo ». Samy manana ny asany ary tsy azo afangaro izy telo ireo.
Ny fotoam-pivavahana rehetra izay ataon’ny Katôlika dia manomboka sy miafara amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina avokoa.
Andeha ary isika hamakivaky ny Tenin’Andriamanitra sy ny tantaram-pamonjena :
 Tamin’ny nahariana an’izao tontolo izao, ao amin’ny Boky Jenezy : « Andeha isika hanao olona mitovy endrika amintsika» dia efa nisy sarintsarin’olona maromaro ao ambadiky ny teny hoe « isika »
 Tamin’ny famangian’ny Anjely Gabriely an’i Masina Maria : ny Anjely dia irak’Andriamanitra Ray, i Jesoa Andriamanitra Zanaka kosa no ao an-kibon’i Masina Maria ary Andriamanitra Fanahy Masina no nametraka Azy tao amin’i Masina Maria.
 Tamin’ny Batemin’i Jesoa : Nisy feon’Andriamanitra Ray avy any an-danitra nanao hoe : (suite…)
Continuer la lecture Toriteny Alahady faha 27 May 2018
« Ny tena Apôstôly : Matoky, Mifankatia, tsy matahotra »
Ry havana, amin’izao alahady fahadimy amin’ny fankalazana ny Paka izao dia miova kely ny fomba fijerin ‘ny mpandinika. Nanomboka tamin’ny alahadin’ny Paka hatramin’ny alahady fahefatra amin’ny fankalazana ny Paka dia ny fijoroana vavolombelona nataon’i Md Piera sy Md Joany no nambara tamintsika.
Amin’ity alahady ity kosa dia olona mpanenjika ny Fiangonana Katôlika sy mpamono ny Kristianina mihitsy indray no mijoro ho vavolombelona amintsika, dia i Md Paoly izany. I Paoly moa dia anisan’ireo Jody nankasitraka ny fanankanana ny fivavahana kristianina mba tsy hiely maneran-tany, ka rehefa tany an-dalana tany Damasy izy no nisehoan’i Jesoa. Teo no nilazan’i Jesoa fa tena velona tokoa Izy fa tsy hoe nisy nangalatra ny fatiny. Rehefa niverina avy any Damasy izy dia nankao Jerosalema ka ireo Jody nanao azy hoe mpamadika ary ireo Apôstôly koa tsy nino azy noho izy nanenjika ny kristianina. Niverina tany Tarsa i Md Paoly nandritra ny taona maromaro ka nalain’i Barnabe Apôstôly ary nentiny teo anatrehan’ny Apôstôly ka teo no nitantaran’i Md Paoly ny nanjo azy sy ny fandresen-dahatra tao anatiny fa i Jesoa no (suite…)
Continuer la lecture Toriteny Alahady 30 Aprily 2018